Moments Neshamwari 57
Ndeipi nzira yakanaka yekubatanidza hurumende yekumuka uye kurota kuitira kuti pasave nenguva iyo iyo munhu akarara asina chaanoziva?
Nyaya yekubvunza iyi ndeimwe isingawanzo kufungwa nezvayo. Vaya vakazvifunga vakafunga nezvakawanda kuti hazvina kukodzera. Asi chinyorwa chakakosha. Kunyangwe iyo nguva yekusaziva pakati pekumuka nekurota isingagone kupedzwa nekureba sekunge murume asiri chinhu chinopfuura murume, inogona kupfupikiswa zvakanyanya. Mukumuka kwemurume murume anoziva zvinhu pamusoro pake, uye neimwe nzira anozviziva iye. Mumamiriro ekurota iye anoziva neimwe nzira.
Iye murume chaiye musimboti wekuziva, mwenje unoziva mukati memuviri. Iye, seiyi nheyo inoziva, inobatana mukumuka mamiriro emuviri wepituitary, iri gango rakabatanidzwa mudanda. Pane pituitary yemuviri chimiro chinomutaurira kwaari ruzivo nezve mashandiro anoitwa mumuviri, sekufema, kugaya, kuvanza, uye mhedzisiro yekuitwa uku sekunakidzwa kana kurwadzisa nerves. Iwo manzwi, kuburikidza nerves, anoita kuti nheyo inoziva izive zvinhu zviri munyika. Masikirwo anoita pane ino nheyo inoziva kubva mukati uye kubva kunze. Munguva yekumuka, kubva mukati svika kune mamiriro emuviri wemurume; kubva kunze sekunge kwezvinhu zvekunzwisisa kwepasirese. Chisikwa chinoshanda paari kuburikidza neyemanzwiro evhu sisitimu, chiteshi chekurekodha icho, muuropi, ndiwo mutezo wemuviri. Munhu akabata bata muviri wake kuburikidza nehuropi hwepakati, hutongi hwehutongi hwayo hunoriwo muviri wedumbu. Saka iyo nhungamiro yekuziva iri mukubata nechisikwa kuburikidza neiyo pituitary muviri, uye inobata pachisikirwo uye inobata muviri wayo kuburikidza neiyo imwe nzvimbo yepituitary.
Iyo pituitary muviri chigaro uye chinzvimbo kubva icho chinoziva nheyo chinogashira zvinongedzo kubva kune zvakasikwa uye kubva pane izvo izvo nheyo inodzora zvinoshanda, zviite kana kuita zvinopesana nemasikirwo kuburikidza neiyo central system system. Iyo inopenya yekubatana mune iyo yekumuka pamusoro pituitary muviri inopindira uye kudzora zvisingabvumirwe uye zvakasikwa mabasa emuviri. Icho chinopenya mwenje pane pituitary muviri unoisa kunetsa pane zvakasikwa mashandiro emuviri, uye chichivhara masimba ehupenyu kubva kugadzirisa matishu nemitezo nemishini yemuviri, nekudaro kuchichengeta wakasimba. Mwenje inopenya inoita kuti muviri wese uve mukutambudzika, uye kana iko kushushikana kukaenderera mberi kwenguva yakareba kufa kwaizotevera, sezvo pasina masimba ehupenyu anogona kupinda apo muviri uri mukutambudzika nekuda kwekupenya uku. Kuti muviri urambe uchienda saka zvakafanira kuti muviri uve nenguva painenge isina kukanganiswa, uye kana ichizorora nekudzokorora. Nechikonzero ichi nguva yezvinonzi kurara inopihwa muviri. Kurara kunopa chimiro kune muviri kune iyo masimba ehupenyu anogona kupinda, kuigadzirisa, uye kuiporesa. Kurara kunogoneka kana iwo mwenje wenheyo yekuziva uchisiya kupenya pane pituitary muviri.
Iyo nheyo inoziva chikamu che pfungwa. ndicho chikamu chefungwa chinobata muviri. Iyo yekubatana inoitwa kuburikidza neyemukati nerweseri system uye inotongwa kuburikidza nepituitary muviri. Kutora ndiyo nyika inokonzerwa nekubatana kuripo pakati peiyo pakati pehusope system uye yetsitsi yekunzwa system kuburikidza neyakajairika nzvimbo, iyo pituitary muviri. Chero bedzi nheyo yekuziva ichivhenekera kujekesa kwayo pituitary body murume akasvinura - kureva kuziva nyika. Chero bedzi kuratidzira kunopihwa kune iyo nheyo yekuziva kuburikidza neyekunzwisisika sisitimu system, nheyo inoziva inochengetedza mwenje wayo unopenya pane iyo pituitary body uye nokudaro inobata muviri wese wemuviri. Kana muviri wakaneta kwazvo kubva mukuneta uye wapera simba rayo rakakosha haugamuchire zvinoratidzwa kubva kune zvakasikwa uye saka haugone kuendesa kune iyo pituitary body, kunyangwe pfungwa dzaizogamuchira ipapo. Ndozvazvinoita kana muviri wakaneta asi pfungwa dzinoda kusvinura. Rimwe danho nderekuti iyo iyo iyo pfungwa pachayo isingafariri maitiro ayo inogona kugamuchira kubva kune zvakasikwa uye iyo pachayo yakagadzirira kubvisa. Panguva mbiri idzi kurara kunozoitika.
Kurara kunoisa mukati apo switch inobatanidza maviri seti yemitsipa mumuviri wechipituiti yakatendeuka kuitira kuti kubatana kudambuke.
Mushure mekunge kubatana kwatyorwa musimboti wekuziva uri mumamiriro ekurota, kana mune iyo mamiriro ayo asina ndangariro anochengetwa. Kurota kunoitika kana nheyo yekuziva ikapenya, sezvaanowanzoita, pamitsipa yemanzwiro, ayo akabatana nehuropi. Kana iyo nheyo yekuziva isingapenye pane idzi nzizi hapana zviroto.
Munguva yekumuka nguva iyo nheyo inoziva iri mune yepakati, kupenya-kunge kubatana neiyo pituitary muviri. Uku kudzvanya-kunge kusangana ndiko kunodaidzwa nemunhu kuziva, asi kutaura zvazviri, kusaziva. Nekudaro, kusvika pese pazvinoenda, uyezve sezvo zviri izvo zvese izvo munhu ari mune zvazvazvino anogona kuziva nezvake, ngaaite, nekuda kwesimba, kuve kunonzi kusaziva. Ndihwo hwaro hwaakamira iye mukumuka kwake. Aisazomboziva kana kuziva chero chinhu kana nyika yekunze isina kuita paari ndokumusimudza. Paanenge achimutswa nehunhu anoziva nenzira dzakasiyana siyana, uye huwandu hwese hwekunakidzwa kana hunorwadza sensions ndouya anozvidaidza iye. Iko kusara kwehuwandu hwezviratidziro zvinopihwa nechisikwa anozvizivisa saiye. Asi izvo hazvisi iye amene. Uku kuwanda kwezvibodzwa zvinomutadzisa kuziva kuti iye ndiani kana kuti ndiani. Sezvo iye asingazive kuti iye ndiani, ichi chirevo hachizopa ruzivo rwakawanda kumurume wepakati, zvakadaro zvichave zvakakosha kana chirevo charo chikaitika.
Kune, murume paanoenda kunorara, nguva ine rima pakati pekuziva mune yekumuka mamiriro uye kuziva mune yekurota mamiriro. Iyi nguva yerima, panguva iyo murume asingazivi, anokonzerwa nekumuka kwekubatana kana switch yadzimwa uye mwenje wenheyo yekuziva hausisiri kupenya pituitary body.
Munhu asingazive chero chinhu kunze kwekunyepedzera kunogamuchirwa kuburikidza nemanzwiro ari pakumuka nyika kana kurota nyika, ari, chokwadi, asingazvizive iye, sokudanwa kwaanonzi, apo pasina pfungwa yekufungidzira inogamuchirwa, kunyangwe mukumuka kana mukurota. Mwenje unoziva unofanirwa kuziva wega kunze kwemanzwiro mukumuka kana kurota, kuitira kuti murume azive. Kana iyo mwenje isingazvizive pachayo uye iyo mamiriro akasiyana zvachose neizvo inozivikanwa sepanomuka uye nekurota nyika, saka haigone kuve neyakavhunika yekuziva nguva pakati penyika mbiri. Kunyangwe munhu asingagone kuramba achiziva, iye anogona kupfupisa nguva iyo iye asingazivi, kuti zvioneke kwaari kuti hapana zororo.
Mhinduro yemubvunzo isati yanzwisisika kuvepo kwechokwadi ichi chinofanira kunzwisiswa, kunyangwe chokwadi icho pachacho chingasazadzikiswa. Kana chokwadi ichi chanzwisiswa, munhu anoda kuziva panguva yerima nguva yekumuka uye yekurota nyika achanzwisisa kuti mamiriro ekuziva haafanire kungogaramo munguva panguva yekutarisa, kunze kwekunge mamiriro ekuziva aripo panguva yekumuka. uye hope dzinoti; nemamwe mazwi, kuti murume anofanirwa kuve ari pamusoro pemurume anoziva izvo zvaanozvidaidza, asi arikungosara chete iro rizere rerengedzo yezvizere zvinoitwa nemanzwisisiro anoita kujeka kwepfungwa. Anofanira kuziva kuti ndiye mwenje wekuziva wepfungwa, semusiyano pakufunga kwezvinhu zvakabudirwa nechiedza.